Articles tagged 'benjani'
Mwaruwari's father burial set for Saturday 1 April 2015 BULAWAYO - Former Zimbabwe captain Benjani Mwaruwari's father Amon, who passed away at the weekend is expected to be buried on Saturday in Bulawayo. Benjani, who played 31 times for Zimbabwe between 1999 and 2010, is expected to arrive in Bulawayo from a trip in the United Kingdom today. Fa...
Which Zimbos have played in the Uefa Champions League? 7 May 2014 HARARE - Following Costa Nhamoinesu’s outstanding feat of winning the Czech Republic league title with his club Sparta Prague – leaving the defender from Masvingo on the verge of playing in the elite Uefa Champions League competition – contrasting stats have emerged about the number and identity ...
Benjani impresses at Supersport 8 September 2012 JOHANNESBURG - Former Portsmouth striker, Benjani Mwaruwari, is looking impressive at training with SuperSport United. A source within the Matsatsantsa camp revealed to the Siya crew that the Zimbabwean has started training with the squad and is looking good. The former Zimbabwe international is ...